B2B စျေးကွက်အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်လမ်းညွှန် | Martech Zone
များစွာသောကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှစီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်များကိုတသမတ်တည်းခွဲခြားရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်ရုန်းကန်နေကြသည်။ g2m ဖြေရှင်းချက်များမှဤအချက်အလက်သည် B2B ၏မက်ထရစ်ကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI ebook တိုင်းတာခြင်း.
Marketing Analytics မှ SMART ချဉ်းကပ်မှု
မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကိုမဆိုစံသတ်မှတ်ထားသောချဉ်းကပ်မှုအတွက်အတိုကောက်သည် SMART ဖြစ်သည်။
AKey ကိုတွေ့ရှိချက် nalyze
omni-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစတင်ခြင်းနှင့်အတူသင်၏ site သို့လာရောက်သူ virt ည့်သည်အားလုံးနီးပါးသည်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ရောက်ရှိခြင်း၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ အစဉ်အလာနှင့်ဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်မိုက်ခရိုအဆင့်တွင်အသုံးမပြုသည်သာမကမက်ခရိုအဆင့်တွင် analytics နှင့်စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်အတွက်မက်ထရစ်နေဆဲသင့်လျော်သည်။ အဆင့်သုံးဆင့်သည် TOFU၊ MOFU နှင့် BOFU တို့ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။
တိုဖာ (Top of Funnel) - ဤသည်မှာသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကို your ည့်သည်များဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်မှန်းချက်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ရှာဖွေမှု၊ လူမှုရေး၊ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ဆိုဒ်များ၊ လမ်းညွှန်များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အလားအလာများကိုသုတေသနပြုသည့်နေရာတွင်တွေ့ရှိရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
MOFU (Funnel of Middle) - ဤအရာသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်သူဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာအခုထိရောင်းမရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ကသူတို့သုတေသနမှာမင်းကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးမင်းနဲ့နောက်ထပ်ပူးပေါင်းဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်သင်ဝယ်ယူမှုသံသရာအတွင်းသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမောင်းနှင်နိုင်ရန်ကောင်းမွန်သောခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာများကိုသင်အသုံးပြုလိုသော visitors ည့်သည်များဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဤအဆင့်တွင်အဓိကကျသည်။
ဇော်ပိုင် (အောက်ခြေ) - ဤသည်မှာ ၀ ယ်သူများဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ ၀ ယ်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ၊ သူတို့မှာဘတ်ဂျက်ရှိတယ်၊ သူတို့မှာပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သင့်မှာကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ ဤအဆင့်သည်သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တို့တွင်အရေးပါသည်။ ဤသည်မှာအရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းပညာသည်သင်၏စကားဝိုင်းများကိုအလိုအလျောက်တိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။
Funnel ၏ထိပ် - အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအသွားအလာ၊ အော်ဂဲနစ်သော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရည်ညွှန်းအသွားအလာ၊ ပေးဆောင်ရသည့်ရှာဖွေမှုအသွားအလာ၊ ရှာဖွေမှုကုန်ကျစရိတ်၊ ကလစ်တစ်ခေါက်ပေးရသောရှာဖွေမှုကုန်ကျစရိတ်၊ (လူမှုရေးအက်ပ်အသွားအလာများပါ ၀ င်သောတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း)၊
Funnel ၏အလယ် - Call-to-Actions အပေါ်ကြည့်ရှုရန်၊ Landing စာမျက်နှာများကိုနှိပ်ရန်နှင့် Landing စာမျက်နှာများရှိတင်ပြမှုအချိုးအစားကိုနှိပ်ပါ။ သင့်အားအချက်အလက်အသစ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ မောင်းနှင်ခြင်းအတွက် verbiage, layouts နှင့် content များကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
Funnel fo အောက် - ခဲပမာဏ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်မှီမှု၊ အရောင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသော ဦး ဆောင်မှု၊ အဆိုပြုလွှာအချိုးသို့ ဦး တည်ခြင်း၊ အချိုးအစားနီးကပ်ရန်အဆိုပြုချက်နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအချိုးကိုဤအဆင့်တွင်နှင့်အဆင့်တိုင်းတွင်တိုင်းတာသည်။
Tags: analyticsb2b သရုပ်ခွဲb2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျောက်တံတားကတော့၏အောက်ခြေအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြောင်းလဲခြင်းအချိုးကိုနှိပ်ပါအချိုးအစားပြောင်းလဲရန်ကိုနှိပ်ပါကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းကူးပြောင်းနှုန်းပြောင်းလဲမှုအချိုးCTRတိုက်ရိုက်အသွားအလာdirectory များdownloads,ဆင်းသက်စာမျက်နှာများခဲအသံအတိုးအကျယ်အဆိုပြုချက်အချိုးကို ဦး တည်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်ဆောင်ကတော့အလယ်။ ။အော်ဂဲနစ် keyword ကိုအဆင့်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအသွားအလာအော်ဂဲနစ်လူမှုမီဒီယာအသွားအလာပေးဆောင်ရှာဖွေကုန်ကျစရိတ်ကလစ်တစ်ခုနှုန်းပေးဆောင်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ရှာဖွေရေးအသွားအလာပေးဆောင်လူမှုမီဒီယာအသွားအလာအချိုးပိတ်ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုလွှဲပြောင်းအသွားအလာမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ဆိုဒ်များအရောင်းအရည်အချင်းပြည့်ဆောင်Search ကိုစျေးကွက်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်tofulemb ၏ထိပ်အချိုးအစားကိုကလစ်နှိပ်ပါ
27:2014 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 19
မင်္ဂလာပါ Doug - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်စတင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ လူများစွာသည်နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးနှင့်မဟာဗျူဟာများဖြင့်လွှမ်းမိုးထားသည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းတိုင်းတာရန်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်သည်သင်ဘာပြောမည်နည်း။ ဒါကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်